Ungayenga kanjani umuntu wesifazane | Amadoda aSitayela
Itimu yokuyenga Kungaba ubuciko kubo bonke abantu abangenankinga yokudala leso sipelingi. Kodwa-ke, asekhona amadoda okuthi bahlangabezana nalokhu kukhubeka okukhulu, ngoba ubuciko bokukhohlisa owesifazane buba yinto engafinyeleleki.
Amandla okukhohlisa axhunyaniswe nentshisekelo ye- ukuheha ukunaka komuntu, ukukwazi ukunqoba lowo mzuzu nokufuna ukuthi ahlangane nawe ukuze kube khona ukudlala ngothando. Uma ufuna ukwazi eminye imininingwane kufanele wazi ukuthi yini esiyiphakamisayo ukuze lowo mzuzu ukukhanga okukhulu kokubili.
1 Gqoka ngokwemvelo nangobukhazikhazi
2 Qala ukufuna izimpawu zakho
3 Sebenzisa ulimi lomzimba wakho
4 Ngesikhathi sokuxhumana
5 Amaphuzu abalulekile asiza engxoxweni
Gqoka ngokwemvelo nangobukhazikhazi
Ngaphandle kokungabaza, ngaphambi kokwenza leyo nkulumo, uma sekuvele kunochungechunge lokubukeka, kuzofanele usilindele leso sikhathi futhi umvumele abone ukuthi lokhu akubonayo kulungile. Ukubukeka kwakho nokugqoka kwakhoLezi kuzoba ngenye yezinto ezizokudonsela amehlo.
Khetha izingubo ezingathathi hlangothi, ezithophayo ezikwenza ubukeke umuhle, noma ngabe uhamba ngokunganaki. Khumbula ukuthi izingubo ozikhethayo yizona ezikwenza uzizwe kahle futhi ezihambisana nobuntu bakho kwazise abesifazane bakunaka kakhulu lokho.
Thatha ishawa ngaphambi kokuphuma ukunqoba, yiba nezinwele ezinhle futhi uma unentshebe kumele ube nayo uzilungise kahle. Amakha anobuntu nowesilisa nakho kunqoba ngezinga elikhulu. Ngayo yonke le mininingwane emincane uzokwenza uzizwe uqiniseka ngokwengeziwe ukuze ukwazi ukuba nguwe.
Qala ukufuna izimpawu zakho
Uma uqaphele lowo wesifazane, usuqalile qaphela ukuthi iziphatha kanjani futhi yenza kanjani. Leyo ntombazane, uma ibonile ukuba khona kwakho, izokwazi ukukhombisa enye into ngochungechunge lwezimpawu.
Uma owesifazane ekubuka, ubheke eceleni bese uyakubheka futhi, impela ukubonile. Uma ekumamatheka futhi ahambisa amehlo akhe ngokucijile akubuke, ngokuqinisekile ziyizimpawu ezinhle kakhulu. Mhlawumbe futhi, phakathi kwalokhu kubukeka mhlawumbe yehlisa ikhanda lakho bese ubheka eceleni, noma ehleka ngokwesaba. Kubuye kube yinkomba yokuthi kungenzeka kube noxhumana naye.
Sebenzisa ulimi lomzimba wakho
Uma ufuna ukuba khona kwakho kuboniswe njengokomnumzane futhi, kufanele dala ukuthintana okuhle nenokuphepha. Ungalingehlisi ikhanda, gcina umzimba wakho umile namahlombe emuva nenhloko iphakeme. Uma kukhona okuphuzayo, ungasibambi leso siphuzo phambi kwesifuba sakho bese zama ukuphendulela umzimba wakho kuye.
Uma ukhethe ukuzethula kulowo wesifazane, kufanele dala isimo sokuhlangana ukuze ahlale axoxe nawe umzuzwana. Ungaqala nge Unjani? FUTHI hhayi ukwakha imisho engenathemba kakhulu. Kufanele uthole indlela yokwephula isikhunta futhi uthole ubuciko bokuheha lowo wesifazane. Ukuqala isimo sakho sengqondo kufanele sibe nomusa futhi sibe semvelo.
Isikhundla sakho kufanele sithandeke futhi sithande, lokho kuchaza intshisekelo yakho, kepha ngobumnandi. Ungaphakamisi izwi lakho, noma ube luhlaza, noma ungabi nethemba. Owesifazane uyojabula kakhulu lapho bebona indoda yangempela egcwele uyahlekisa. Akukhona ukukhuluma amahlaya njalo, kepha ukuthola yonke into okuhle ngayo nge izincazelo ezihlekisayo.
Uma kunguyena onquma ukukhuluma lalelisisa, uyavuma futhi uyithatha kalula yonke imibono yakhe. Khombisa intshisekelo yakho uphinde uhlanganise izimpikiswano zabo namagama angalekelela ingxoxo yabo. Ngaphezu kwakho konke, gcizelela ukuthi izwa kanjani futhi ube nentshisekelo yokuthi ungamsiza kanjani.
Uma uzothuthela kwenye indawo futhi uzomphelezela, kuyathokozisa ukuthi uzwe ubukhona bakho uqaphela ukuthinta kwezandla zakho. Ungambamba ngesandla umqondise ekhoneni noma ubeke isandla sakho emhlane noma okhalweni, ukuze ezwe ukuthinta kwakho.
Amaphuzu abalulekile asiza engxoxweni
Ukuma kwakho maqondana nokuba khona kuyisici esiyinhloko. Kufanele udlulise ukuzethemba bese uzama ukukhululeka. Ukuze wenze lokhu, gcina ukuma okuhle, ngesifuba sakho kuphakanyisiwe, amahlombe akho emuva, kepha ngaphandle kokuqina.
Enye into ebhebhethekisa ubuhlakani bakho kungaba nini indoda ikhuluma ngobuqotho futhi ivumele imizwa yayo ikhule. Abesilisa kungenzeka bakhombise ukuba sengozini kwabo, kepha lesi sici siheha abesifazane kakhulu, babona amadoda efiseleka kakhulu ngokocansi.
Okokugcina makube nguye ophambiliUma efuna ukukhuluma, ake azivolontiye futhi lalelisisa. Awukwazi ukuba ngumlingisi ophambili wale ngxoxo futhi ukhulume ngokweqile, futhi awunakuzibeka njalo njengomuntu ongeke ahlangabezane nokulindelwe okuthile. Ubuqotho nokwethembana kuyahambisana ukwazi ukunqoba umuntu.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngobuciko bokukhohlisa ungasifunda "Ungayenga kanjani umuntu wesifazane","kusho ukuthini uma umuntu wesifazane ekutshela izinto zakhe"Noma"kusho ukuthini uma umuntu wesifazane ebuka emehlweni akho".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ungayenga kanjani umuntu wesifazane